Global Voices teny Malagasy · 3 Marsa 2018
03 Marsa 2018
Tantara tamin'ny 03 Marsa 2018
Fihaonambe Copenhagen: Nanadino Ny Zava-dehibe Ireo Minisitra Nepaley
Azia Atsimo03 Marsa 2018
Tsy miafina fa efa miatrika ny voka-dratsin'ny fiovaovan'ny toetr'andro i Nepal. Manomboka amin'ny hain-tany maharitra ela hatramin'ny tsy fisian'ny vokatra sy ny fiempon'ny vongan-dranomandrin'i Himalayas, atahorana ny firenena raha ny fiakaran'ny mari-pàna manerantany no resahana.
Libanona: Fanangonana Kilalao [Fun(d) Raising]
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana03 Marsa 2018
Vondrona bilaogera Libaney no nanapa-kevitra hampitsiky ireo ankizy sahirana amin'ny alàlan'ny fanomezana kilalao Krismasy. Fun(d) Raising (Fanangonana Kilalao) no anaran'ny tetikasan'izy ireo ary mitondra fifaliana sy fahafinaretana ho an'ny rehetra izany.
Meksika: Mariazy sy Fananganan-jaza Ho an'ny Mpifankatia Pelaka Ao An-drenivohitra
Amerika Latina03 Marsa 2018
Nankatoavina ho ara-dalàna ao Mexico City ny fanambadian'ny lahy samy lahy na vavy samy vavy, taorian'ny fanitsiana nataon'ny Antenimieram-pirenena tamin'ny fehezan-dalàna sivily tamin'ny 21 Desambra. Nandritra izany fivoriana izany ihany, nolaniana ny lalàna ahafahan'ny mpifankatia pelaka hanangan-jaza.
Izao no Hitantsika ao amin'ny Lahatahiry An-tseraseran'ny Gadra Politika Vietnamiana
Azia Atsinanana03 Marsa 2018
Porofoin'ny rakitra vaovao nivoaka ny fitomboan'ny fanenjehana ireo mpanivaka amin'ny fitenenana tamin'ny taona 2017.
Miezaka Mamelona Hatrany Ny Fiteny Skolt Ireo Vehivavy Sámi
Eoropa Andrefana03 Marsa 2018
" Mafana fo amin'ny fianarana ilay fiteny ny olon-dehibe sy ny ankizy, saingy tokony ataontsika ny fomba izay ahatonga ilay fiteny Skolt Sámi mba ho lasa fiteny mahazatra amin'ny fampiasana azy amin'ny fiainana andavanandro."